ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ဒီကလေးမကို တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုကြီးတို့အမေ...
ကြွေလွင့်ခဲ့သောမြောက်ပိုင်းဥက္ကဌကိုထွန်းအောင်ကျော်၇ဲ့ မိခင် ..
You, Aung Than Nyunt Aungnilai, Soe Lynn, Aung Gyi Gscand 79 others like this.
Phyo Mg Mg Win အမေ မျက်ရည် ကျမိပါတယ် အမေ
December 30, 2012 at 10:45am · Like · 2
K Ki Ki ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့ သားသမီးတွေကို မျှော်နေခဲ့ကြ.. မျှော်နေကြဆဲ မိဘ အိုကြီးတွေရဲ့ ပူဆွေးသောက ကို၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်သူတိုင်း ခံစားကြည့်လို့ ရ တယ်.. ။ လူသတ်သမားတွေလည်း ခုချိန်ဆို မိဘနေရာ ရောက်နေကြပြီ.. ဝဋ်ဆိုတာ ဘဝ မကူးပဲ လည်း လည်တတ်တယ် ဆိုတာ သူတို့ သိလာတဲ့တနေ့ ..သိပ် မဝေးတော့ပါဘူး..
December 30, 2012 at 10:48am · Like · 9
Zstream Zin ဂုဏ်ယူပါအမေ သူရဲကောင်းသားမျိုးကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ ၊ သမိုင်းအဖျက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့ သူ့သမိုင်းမှ မပျက်တာပဲအမေ၊ သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသမှုတွေက အားလုံးရင်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။
အမေရဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုများကိုလည်း ထပ်တူကိုယ်ချင်းစာပါတယ် အမေ
December 30, 2012 at 11:12am · Like · 13
Nay Myo Aung Ma nge yayy yin hte mhar ma kaung buu byar...
December 30, 2012 at 12:30pm · Like · 4
Soe Yazar ရင်သို့ထိသည်
December 30, 2012 at 12:37pm · Like · 4
မိုး စဲ ဒီဓါတ်ပုံဟာ...တော်တော်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲစရာ ကောင်းပါတယ်..
December 30, 2012 at 2:40pm · Like · 5
Aung Than Nyunt Aungnilaiဝေဒနာအသစ်တွေဖြစ်ရပြန်ပြီ..၊ဒီပုံကိုကြည့် နေရင်း..ရင်ထဲ မှာဆို့ တက်လာတယ်မငယ်ရယ်။
January 1 at 3:26am · Like · 8
Nyan Naung အမေ အမေ အမေ
January 1 at 6:15am · Like · 3
Min Thu Kyaw ဝမ်းနည်းတယ်ဗျာ . . အစ်မတို့ ရေးတာတွေကိုဖတ်ရသလောက်ကျွန်တော် ကိုထွန်းအောင်ကျော်သေဆုံးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ပုံဖော်ကြည့်ပါတယ် . . ပုံရိပ်တွေက ပီပြင်လာလေလေ . . ရင်ထဲမှာ ပိုခံစားရလေလေပါပဲ . . .
January2at 1:48am · Like · 3
January2at 2:30am · Like
Htun Aung Gyaw အမေကဒို့ကိုတွေ့တော့" သားပြန်လာတယ်နော်တဲ့အမေမျှော်လိုက်ရတာသားရယ်"တဲ့ အကြာ ကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒို့လက်ကိုကိုင်ထားတယ် နောက်မှ နံမည်သာပြန်လာတယ်လူပါမလာဘူးနော် တဲ့ အမေတယောက်ရဲ့ကြေကွဲသံကိုအခုထိကြားနေသလိုဘဲ။ ဒါတွေဟာကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့သူတွေသာနားလည်ခံစားနိုင်တဲ့ အရာ တွေပါ။
January2at 3:47am · Like · 21
Yan Shinn Even forawell grown up man, this picture made his tears rolls out straight away.
January2at 4:01am · Like · 1
Thit Moe ကြွေလွင့်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ခြွေချခံခဲ့ရတာပါ
January2at 4:51am · Like · 7
Momo Ag စိတ်မကောင်းပါဘူး..ဒါပေမဲ့ လိုက် ဆိုတဲ့ခလုပ်လေး နှိတ်လိုက်မိတယ်..
January2at 5:20am · Like · 1
ရဲ ရင့် သော သားကောင်းတစ် ယောက် မိခင်က သားသ္မီးပေါင်းမြောက်များစွာ ကိုပိုင်ဆိုင်ရ ၏ — with Nang Aung Htwe Kyi.
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, Ye Myint and 46 others like this.
ခေါင်းဆောင် ကောင်းတစ် ယောက် ကိုလေးစားသလို မွေးဖွားပေးခဲ့ သော မိခင် ကို လဲ လေးစားချစ်ခင် ကြ ပါသည်
You, Nang Aung Htwe Kyi, Ye Myint, Maungmaung Skw and27 others like this.
Champion Muse မငယ်ကိုဒီမနက်တွေ့တယ်(mdy) လေးစားဂုဏ်ပြုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပါ။မငယ်ကားပေါ်တက်ရင်းphပြောနေလို့ စိတ်ထဲကပဲ
December 22, 2012 at 10:05am via mobile · Like
Champion Muse နှုတ်ဆက်လိုက်မိတယ် (လေးစားပါတယ်)
December 22, 2012 at 10:06am via mobile · Like
December 22, 2012 at 11:43am · Like · 1
သား ကောင်းမိခင် နှင့် အမှန် တရားကို ရဲ ရဲ ၀င့်ဝင့် ဖေါ်ထုတ် မည့် သူ
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, Htay Tint and32 others like this.
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:59 PM
Labels: ဓါတ်ပုံဖိုင်, မနန်းအောင်ထွေးကြည်